Sida Lacag Loogu Sameeyo App-ka Casharka - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida Lacag Loogu Sameeyo App-ka Casharka
Haddii aad rabto inaad lacag ku samayso app-ka Cash, waxaa jira siyaabo badan oo aad sidaas ku samayn karto. Waxaad ku kasban kartaa lacag xitaa adigoo isticmaalaya kaarka deynta sida aad arki doonto haddii aad raacdo maqaalkan. Sidoo kale gudbinta xitaa adigoo isticmaalaya cusub ee Cash App, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato sida lacag looga sameeyo goobtan.
Haddii aad daalan tahay daawashada fiidiyowyada aan sharciga ahayn iyo akhrinta aad u wanaagsan si aad u noqoto siyaabo run ah oo lacag loogu sameeyo Cash App, ka dibna maqaalkan waxaan ka hadli doonaa dhowr siyaabood oo sharci ah oo fudud oo aad lacag ku heli karto Cash App.
Waa maxay Lacagta Lacagta?
Cash App waa mobile-ka bilaashka ah kaas oo kaa caawinaya iibsashada iyo iibinta Bitcoin, si fudud lacag ugu diri saaxiibadaa iyo qoyskaaga, una maamula akoonkaaga meel kasta oo aad tagto. Cash App waa nidaam lacag-bixineedka moobilka oo la mid ah Venmo.
App-ka waxa la bilaabay 2013-kii, waxa uu si wayn u koray waxana uu helay aqoonsi dheeraad ah labadii sano ee la soo dhaafay; hadda waxa isticmaala in ka badan 6 milyan oo isticmaale, waxaana laga heli karaa dukaanka Apple Store iyo Play Store, taas oo macnaheedu yahay in aad si fudud ugu soo dejisan karto taleefankaaga casriga ah. 30ka milyan ee isticmaalayaasha firfircoon ee bishiiba, Cash App-ka wuxuu leeyahay, toddobo milyan oo kaar lacag caddaan ah leh sida ay sheegtay Cash App-ka.
Lacag-bixinta Cash App-ka waa lacag la'aan, waxaad lacag u diri kartaa wakhti kasta oo maalintii ah qof kasta oo wata ciwaanka emailka ama lambarka taleefanka. Ma jiraan wax kharash ah oo ku xidhan.
Lacag-bixinta ayaa sidoo kale aad u degdeg badan, lacag-bixinta waxaa lagu xalliyaa saacad gudaheed celcelis ahaan, halka barnaamijyada kale ee la midka ah ay qaadan karaan ilaa saddex maalmood. Wax kala iibsiga App-ka kaashka ah uma baahna akoon bangi
Ku Bilaabashada Cash App-ka
Waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo inaad haysato akoon bangi dibadda ah si aad ugu isticmaasho si aad u maalgeliso akoonkaaga App-ka Cash iyo sidoo kale aad u hesho meel aad sidoo kale u isticmaali doonto inaad kala baxdo lacagahaaga Cash App-ka markasta oo baahi jirto .
Markaa waxaad ku soo dejisan doontaa Cash App-ka casriga ah, waxa laga heli karaa labadaba dukaanka Apple ee isticmaalayaasha iPhone iyo PlayStore ee isticmaalayaasha android. App-ka ayaa ku dhex mari doona isdiiwaan gelinta, halka marka hore aad ka bilaabi doonto adiga oo abuuraya akoon isticmaale oo aad ugu yaraan hal akoon bangi ku xidhi doonto akoontiga la abuuray.
Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho akoonkaas bangiga si aad lacag ugu dirto isticmaalayaasha kale ee Cash App-ka iyo sidoo kale inaad lacag uga xawilo akoonkaaga Cash App-ka akoonkaaga bangiga. Iyo sida PayPal, kaas oo sidoo kale kuu ogolaanaya inaad ku xidho xisaab bangi si aad u dirto oo aad lacag u hesho; waxaad sidoo kale haysan kartaa wixii lacag ah ee lagu helo abka ilaa aad diyaar u tahay inaad kala baxdo.
Sida Loo Diro oo Lacag Loogu Helo App-ka Lacagta?
Interface-ka isticmaalaha ee App-ka lacagta caddaanka ah ayaa si cajiib ah u fudud in lagu bilaabo, taas oo ka dhigaysa dirida iyo helista lacag fudud. Si aad lacag u soo dirto, waxaad ka heli doontaa qofka helaya magaciisa, telefoon nambarkiisa, ama $Cashtag gudaha abka. Waxaad soo dirtaa lacagta caddaanka ah, markaas qofka aad u dirayso wuxuu heli doonaa iimayl ama digniin qoraal ah. Qaataha ayaa dooranaya sida ugu dhakhsaha badan ee wareejintu u socoto.
Marka ay timaado helitaanka lacag, waxaad soo diri kartaa codsi lacag bixin ah. Codsiga waxaa lagu soo diri karaa magaca qofka, $Cashtag, iimaylka, ama lambarka taleefanka. App-ka ayaa ku ogeysiin doona marka lacagta la bixiyo. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho lacagta.
Doorasho kale ayaa ah in aad ku shubi karto lacagta aad hesho akoonkaaga bangiga ama kaarka deynta ee ku xiran. Lacagta caddaanka ahi waxay isla markaaba kuugu shubtaa kaadhkaaga debit-ka, laakiin waxay qaadan kartaa ilaa 3 maalmood in deebaajigu ku dhaco akoonkaaga. Si kastaba ha ahaatee, labadan dhigaalba waa lacag la'aan.
Sidee Lacag Looga Sameeyaa App-ka Casharka?
Waxaa jira muuqaalo badan oo ku jira YouTube-ka iyo maqaallo kale kuwaas oo ku siinaya siyaabo dhowr ah oo aad lacag uga samayn karto App-ka Cash laakiin intooda badan waa khiyaamo oo aan sharci ahayn. Halkan waxaan diirada saaraynaa kaliya habka saxda ah ee lacag looga samaynayo App-ka Cash.
Ku samee fiidiyowyada YouTube App Cash
Falanqaynta raadinta YouTube ayaa muujisay in ay jiraan baaritaanno badan oo ku saabsan App-ka Cash kaas oo ka dhigaya baahida xilligan. Fiidiyowyada yar ee ku jira App-ka Casharka ee ku jira YouTube ayaa helaya muuqaallo tiro badan.
Sida ugu fiican ee aad ku mari karto waa in aad cilmi baadhis ku samayso sifo gaar ah oo aad aaminsantahay in uu u baahan yahay caddayn oo aad muuqaal ka samayso. Si aan ku siiyo tusaale ahaan waxaad samayn kartaa fiidiyoow ku saabsan maalgelinta Bitcoin Cash App, waxaa jira fiidiyowyo aad u yar oo la mid ah taas oo aad filayso xilligan.
Haddii aadan lahayn bogga YouTube ha ka welwelin waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo aad sidoo kale lacag ku samayn karto Cash App.
Suuqgeynta Affiliate: Tilmaanta App Cash
Tani waa hab aad loogu taliyay waana sahlan tahay. Qof kasta oo kale wuu samayn karaa iyada oo aan dadaal badan lahayn. Cash App-ka waxa uu siinayaa dhammaan isticmaalayaasha fursad ay ku kasbadaan $5 kaliya iyaga oo samaynaya martiqaadyo. Marka isticmaale cusub u diro ilaa $5 akoon cusub oo laga diiwaan galiyay isku xirka la wadaago waxaad helaysaa $5.
Haddii aad tan akhrinayso markaa waxaan aaminsanahay inaad ka diiwaan gashan tahay baraha bulshada ee kala duwan oo aad kaliya la wadaagto xiriirintaada halkaas oo aad ku dhiirigeliso dadka inay isdiiwaangeliyaan iyagoo isticmaalaya isku xirkaaga.
Tusaale ahaan, waxa YouTube ka jira App Cash oo muuqaal ah oo leh in ka badan 750k oo aragtiyo mulkiiluhuna waxa uu la wadaagay xidhiidhkiisa tixraaca ee sharaxaada fiidyaha, xataa haddii kaliya 1% (ie, 7k) ka diiwaan gashan yihiin xidhiidhkaas markaas waa in uu kasbaday in ka badan $35k. hadda.
Helitaanka bitcoin bilaash ah
App-ka Cashu waxa uu siiya isticmaaleyaasheeda kobcinta bitcoin iyagoo wax iibsanaya, soo jeedintan waxay u adeegtaa sida abaal-marin lacageed oo ay bixiso App Cash. Waxa ay tahay in aad ogaato waa in si aad ugu qalanto kobcintan waa in aad haysatid kaadhka lacag-bixinta ee firfircoon ee App-kaga Cashuurta. Sidaa darteed, haddii aadan haysan mid waa inaad dalbataa.
Si aad u kasbato, kaliya ku dhufo calaamadda kaadhka deynta ee xagga hoose ee boggaaga hadhaaga Lacagta Cash App-ka oo waxaad arki doontaa “Ku dar Kobcinta” ee hoostiisa sawirka kaadhka deynta. Horey u soco oo dhagsii ikhtiyaarka "Add Boost" oo waxaad arkaysaa in Cash App uu ku siinayo "Lagu kasbado 3% qiimaha Bitcoin 3 Iibsi". Sidoo kale, ogow in aad u baahan doonto in lacagtaas lagu helo hadhaaga Cash App-ka si aad u isticmaasho oo aad u hesho bitcoins. Bixintani badanaa way timaadaa oo tagtaa oo badiyaa waxay socotaa 3 maalmood.
Isticmaalka Yotta debit card
Adigoo isticmaalaya kaarka debit-ka ee Yotta sida isha lacagta mar kasta oo aad lacag ku bixinayso App-ka Cash, waxaad fursad u helaysaa in lacag caddaan ah lagugu soo celiyo hadhaaga app-ka kaashka, sida ay ugu xayeysiiyaan shabakadooda rasmiga ah.
Kaarka debit-ka ee Yotta wax iibsi kastaa waxa uu fursad u leeyahay in isla markiiba dib loo soo celiyo, wax shuruud ah kuma xidhna. Tani waxay ka shaqeysaa tafaariiqle kasta, laakiin qaar badan ayaan ka warqabin tani waxay sidoo kale ka shaqeysaa Cash App-ka. Sida ay uga muuqato boggooda "100% sharci maaha oo way fududahay in la sameeyo".
Si aad lacag u hesho Lacag caddaan ah Halkan waxaa ah dhowr tillaabo oo aad u baahan tahay inaad raacdo:
Tag Cashappearn.com oo geli aqoonsiga isticmaalaha App-ka Cash oo taabo "Install."
Hadda, waxaad taabataa "Oggolow" marka nidaamku ku weydiiyo ogolaanshaha si aad u soo dejiso oo ku rakibto abka ilo kale ka dibna u gudub wax soo dejinta oo taabo "Ku rakib."
Hadda, fur barnaamijka Cash App Earn software ee aad hadda soo dejisay.
Isla marka aad furto codsiga waxa ay ku tusinaysaa in aad heli doonto $75 kadib marka ay dhamaato hawl kasta oo aad qabato,waxana lacagta laguugu soo shubayaa App-kaga Casharka ah marka aad hesho 150$ iyo ka badan.
App-ka waxa uu ka codsanayaa dadka isticmaala in ay ku rakibaan arjiga oo marka abka la rakibo oo la isticmaalo, isticmaaluhu waxa uu ku helayaa $150 App-ka Casharka ah muddo gaaban gudaheed.
Xaddidaadda Lacagta caddaanka ah ee App-ka
App-ka Casharka ah 7 maalmood gudahood, waxaad ku diri kartaa ilaa $250 oo waxaad ku heli kartaa ilaa $1,000 30 maalmood gudahood. Haddii aad rabto inaad kordhiso xadka dirida iyo helitaanka, waa inaad sii xaqiijisaa aqoonsigaga adeega. Iyo si loo xaqiijiyo si buuxda, Cash App-ka wuxuu ku weydiinayaa magacaaga oo buuxa, dhalasho, iyo 4ta lambar ee u dambeeya lambarkaaga Bulshada.
Haddii la xaqiijiyo waxaad furi kartaa akoon aan lahayn baaqi ugu yar, iyo Cash App ma xayaysiiyo baaqiga ugu badan ee akoonkaaga. Kaliya in lacagta ugu yar ee aad diri karto oo aad heli karto ay tahay $1. Ma jiro wax kharash ah oo adeeg ah ama khidmad bille ah oo hadhaaga Lacagta Appka ah.
Intee in le'eg ayaan ku maalgelin karaa App-ka lacagta caddaanka ah?
Uma baahnid inaad noqoto milyaneer ama xitaa bilyaneer si aad ugu maalgeliso kaydka Cash App-ka.
Adeegga Cash App-ka, waxaad ku iibsan kartaa saamiyo jajab ah, qaybo yaryar oo kayd ah oo ku dhawaad ​​qof kastaa awoodi karo. Waxaad maal gashan kartaa shirkadaha ugu waaweyn, ugu faa'iidada badan meeraha adoon ku bixin lacag caddaan ah oo aad u badan.
Sidee Ammaan U Yahay App-ka Kaashka?
Cash App-ka waxa uu isticmaalaa PCI-DSS, isla hab-maamuuska ay adeegsadaan shirkadaha waaweyn ee kaararka deynta. Lacag-bixinta labada darafba waa sir. Ma aha ammaan ka yar isticmaalka kaarka deynta iyo in kasta oo ammaanku adag yahay, xusuusnow hadhaaga App-ka kaashka maaha mid caymis FDIC ah. Tani waa shaqo joojin ka dhan ah adeegga waana wax maskaxda lagu hayo markaad furato akoon.
Yaa iska leh App-ka Cash?
Cash App waxaa iska leh Square Inc. (SQ), oo hormuud u ah warshadaha tignoolajiyada maaliyadeed. Cash App-ka waa qayb ka mid ah wax-soo-saarka ganacsi ee Square, kaas oo sidoo kale ay ku jiraan software-ka iyo qalabka-iibka-iibka ee ganacsiyada kala duwan.
Cash App-ka waxa loo isticmaali karaa in lacag lagu sameeyo laakiin maaha lacag caddaan ah oo bilaash ah sida xayaysiisyada iyo xayaysiisyaduba u xayeysiiyaan. Waxaan soo bandhignay oo ka wada hadalnay siyaabo badan oo aad lacag xalaal ah uga samayn karto App-ka Casharka.
Cash App-ka waa adeeg ku anfacaya dirida iyo helitaanka lacagta, sidoo kale lagu maalgeliyo kuwa u arka ikhtiyaarka. Wareejintu waa mid dhakhso badan oo fudud, iyo gunnada awood u leh in la maalgeliyo oo la isticmaalo kaarka deynta ee adeegga, guud ahaan marka la hadlo, waxay ka dhigaysaa qalab weyn oo ku jira da'da dhijitaalka ah.
Halkee Lacag Ma Dhigi Karaa Kadhka App-ka Casharka: Hage Buuxa
22ka Apps ee Lacag-samaynta ugu Fiican Your Smartphone ama Mobile
15 Siyaabood oo Lacag Loogu Siinayo Si Loo Soo Dajiyo Rasiidhada 2022 -ka